Ividiyo: Isilayidi iBeta siyeza kungekudala! | Martech Zone
Cofa uqhubeke ukuba wena andiyiboni ividiyo.
Isicatshulwa: Uyibonile iPowerPoint yeMicrosoft. Kodwa awuzange usibone isixhobo esisebenza ngokudibeneyo njenge-Sliderocket-kude kube ngoku. Apha uMitch Grasso, i-CEO kunye nomsunguli, usixelela ngeSliderocket inkampani emva koko asibonise idemo.
Isilayidi ilungiselela i-beta yoluntu kungekudala, sayina namhlanje.
tags: cinefiniIsicwangciso seminyaka esitsha se-imeyileukukhuthazwa komnyhadalaIntengiso yobudlelwaneumbhali 4ityhunaUkuqonda torbit
Ithuba lokugqibela lokuBhalisa: Isiqingatha soSuku lweWorkshop ngomso
Iinkampani ezijikela kwiiNethiwekhi zaNgaphakathi zeNtlalo
Juni 17, 2008 ngo-12: 16 PM
I-SlideRocket iyamangalisa. Ndenza iintetho ezi-2 ngqo kwiSlideRocket ngomso kwinkomfa. Iya kundivumela ukuba ndixhume phakathi kwemizekelo ye-intanethi kunye nezilayidi ngokulula kakhulu. (Kakade, ndine-.pdf egciniweyo kwiGmail yam nakwi-flash drive ukuze ndikhuseleke! Andikwazi ukuthemba iiwebhusayithi ngalo lonke ixesha….)
Mhlawumbi ndiza kube ndithumela amakhonkco eSlideRocket kwibhlog yam kamva kule veki emva kweenkcazo-ntetho. Ujongano olucocekileyo kakhulu.